Biyo laga helay meere "la degi karo" markii ugu horeysay - BBC News Somali
Biyo laga helay meere "la degi karo" markii ugu horeysay
Lahaanshaha sawirka ESA/UCL
Image caption Meeraha K2-18b waxaa la aaminsan yahay meeraha 50% inuu biya tahay
Cirbixiyeennada oo in mudda ah baaritaanka waday waxay sheegeen meera aan dhulka ahayn iney tahay marki ugu horreysay biya laga helo.
Barafasor Giovanna Tinetti oo hoggaaminaysay kooxda cirbixiyeennada baaritaanka waday oo ka tirsan Jaamacadda London (UCL) ayaa natiijad baaritaankooda ka soo baxday ee meeraha K2-18b biyaha looga helay ku tilmaamtay 'mid maskaxda ka weyn'
"Waa marki ugu horreysay oo aan meera dhulka ahayn biya ka helno kulka meerahasina wuxuu la mid yahay kan dhulka taasoo ka dhigayso mid ay nooluhu ku noolaan karan" ayuu yiri.
Meraha loo yaqaanno K2-18b wuxuu dhulka uu ka fog yahay 650 milyan oo mayl. Meerayaasha ka baxsan falagga cadceeddana waxaa loo yaqaannaa Exoplanet.
Khubarada waxaa kale oo ay sheegeen Telskobka lagu wado in 2020-ka la sameeyo iney u adeegsan doonaan baaritanka la xiriiro meerahaasi in laga helo naqaska noolaha ka soo baxa.
"Caalamkan ma bani aadamka oo keli ah ayaa ku nool? waxay ka mid tahay su'aasha hortaagan cilmiga Saayniska tan ugu muhiimsan" ayey tiri Barafasor Giovanna Tinetti.
Waxay Cirbixiyeennadu sheegeen daraasadda ay natiijdeeda hadda soo sareen iney wadeen inta u dhaxeysay 2016-2017-ka. Sida ay baaritanka ay sameeyeen ay ku xaqiijiyeenna waxay sheegeen iney aaminsan yihiin badka meerahaasi 50% inuu biya yahay, taasoo rajo weyn ku abuurtay iney meeraha K2-18b ay noqon karto mid ku habboon iney dadku ku noolaadaan.
Lahaanshaha sawirka ESA/STFC RAL Space/UCL/Europlanet-Science Office
Image caption Waxaa la filayaa 2028-ka in la xaqiijiyo iney jiraan noole caalam kale ku nool
Ballac ahaanna waxay meerahaasi ka weyntahay ayay yirahdeen cirbixiyeennada baaritaanka sameeyey laba jibbaar iney dhulka ka weyn tahay, kulkeedana uu u dhaxeeyo 0 - 40.
Cirbixiyeennadu waxaa kale oo ay sheegeen iney xaqiijin karin iney meerahaasi bad tahay iyo iney dhagax tahay" waxayna taa u baahan tahay baritaanno intaa dheer.
Barafasor Tinetti waxay sheegtay iney weli jiraan arrima badan oo u baahan in baritaanno qoto dheer lagu sameeyo gaar ahanna maadooyinka Kiimikaalka ee laga helo meeraha K2-18b iyo waxa ay ka sameysan tahay intaba.
Cirbixiyeen sheegay in uu dadka u dalxiis gaynayo meeraha Mars
"Dhulka aan ku nool nahay wuxuu ku taagan yahay nidaamka ceedceedda. Wuxuuna leeyahay Oxygen, biya iyo hawo.Balse haddii arrimahaasi oo dhan aan ka helno meere aad inooga fog waxaan si kalsooni leh u dhihi karnaa waxay taa caawineysaa noolaha" ayey sii raacisay.